Ahoana ny fomba itoriana?
Tombontsoa ho an'ny fanamarinana azo raisina:
Fepetra azo raisina
Ny teny azo raisina dia vaovao vaovao devops fitaovana Nipoitra teo an-tsena ny mpilalao marobe rehefa tonga ny puppet ary ny chef. Manana fomba hafa amin'ny famahana ny olana momba ny fotodrafitrasa sy ny automation izy io. Ny mpanoratra tany am-piandohan'ny Ansible no namorona azy, miaraka amin'ny fikasana handaminana ny fotodrafitrasa, tsy tokony ho takiana hianatra programa ianao. Ho fampifandraisana amin'ny serivisy remote izay mila fitantanana, azo ampiasaina amin'ny ssh * sy rafitra Windows (rafitra remote amin'ny alàlan'ny Windows) ho an'ny rafitra fikandrana windows. T
Training dia tokony ho tsotra, kanto, mora azo ary mora hianarana. Ny torolalana / dingana / asa atao hatao dia voasoratra ao Yamla. Novonoina ny asa. Ao anatin'ilay asa dia takiana ny manambara ny toetry ny rafitra. Ohatra: tokony hapetraka ny package vim. Ahoana ny fomba hametrahana azy, izay nomanina / notontosain'ny modules, tsy voatery hieritreritra be loatra momba izany isika. Raha efa napetraka io fonosana io, dia tsy hiraharaha fotsiny io dingana io ny teny iray. Izany dia antsoina hoe Idempotence.
YAML, endri-tsoratra tsotra ity, mora vakiana sy soratana ho an'ny olombelona sy milina. Ny mahagaga izay mitondra ny fiteny dia mitranga amin'ny zavatra antsoina hoe modules. Azonao atao ny manoratra amin'ny mozika programming. Ny resaka dia mora haingana ary tsy mangataka mpitsikilo izay hapetraka ao amin'ny mpizara tariby. Azonao ampiasaina amin'ny teny portable ho an'ny router / switch, ny iray izay tohanan'ny olona Ansible (ary misy lisitra iray tokoa).
Raha mila mikaroka lalina ao amin'ny Ansible ianao ary mamorona ny mozika manokana anao manokana, raha tsy izany dia ilaina ny mianatra na mahafantatra fiteny iray amin'ny programa.
Zava-dehibe iray hafa tombontsoa avy amin'ny Ansible dia ny loharano malalaka sy malalaka. Voasoratra ao amin'ny Python ary izay mahatakatra python dia afaka mamaky ilay code ary manova azy raha ilaina izany araka ny fepetra takian'izy ireo. Raha jerena ny laza sy ny fananganana ny indostria, i Redhat dia nividy ny Ansible amin'ny 2015, ary ankehitriny dia ampahany ofisialy avy amin'ny fanomezana nataon'i Redhat. Aza manahy fa mbola malalaka sy malalaka ny loharanom-baovao, i Redhat dia manatsara bebe kokoa, mampiditra fehezan-dalàna ary mitombo ity tetikasa ity. Redhat dia manolotra sehatra GUI ahitàna ny tranonkala antsoina hoe Ansible Tower ary dia lafo sy lafo ny hevitro. Izany no mahatonga an'i Redhat mametraka vola amin'ny Ansible. Ny tranoben'ny Ansible dia manome fitantanana Central, miaraka amin'ny analytics sy ny tatitra, ary ny CMDB / inventaire.
Tena tsara ny Fitantanana Change, Automatisation, famoahana sy fandaminana. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity no ahafahanao mitantana ny servero sy ny fangatahanao. Midika izany fa tsy ilaina ny mianatra fitaovana fampiasana manokana toy ny capistrano, lamba sns.
Fepetra azo raisina any Gurgaon